Galmudug & KGS oo kasoo horjeestay Jadwalka ay soo saareen Guddiga doorashooyinka Heer Federaal | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Galmudug & KGS oo kasoo horjeestay Jadwalka ay soo saareen Guddiga doorashooyinka Heer Federaal
written by warsan radio 16/03/2022
Qoraal kasoo baxay Guddiga ayaa lagu shaaciyay in Maanta ay soo aruurinayaan dukumiintiyada Xildhibaannada, halka 24 Bisha ay mid mid u hubinayaan Xildhibaannada labada Aqal ee la doortay.
Soo kale Guddiga waxaa ay ahaaciyeen in Guddoomiyaha Guddiga uu 31 Bishaan ku dhawaaqi doono natiijada guud ahaan Xildhibaannada dooran, halka 2/4/2022 la xareyn doono dhammaan Xildhibaannada labada Aqal si loo dhaariyo 5/4/2022.
Ugu dambeyn Guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa sheegay in 11/4/2022 ay Xogheynta Golaha ku wareejinayaan xogta iyo liiska Xildhibaannada, sidoo kalena 14/4/2022 guddiga oo kaashanaya Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha ay qaban qaabinayaan Xafladda dhaarinta Xildhibaannada.
Hayeeshee Jadwalkaan kasoo baxay Guddiga doorashooyinka heer Federaal ayaa waxaa kasoo horjeestay Maamulada Galmudug iyo Koonfur Galbeed, iyaga oo sheegay in uu yahay mid sharcidarro ah.
Qoraalka Maamulka Galmudug ay soo saareen.
Guddiga Doorashooyinka Heer Federaal waxay qaadeen tallaabo ka baxsan awooddooda, waxeyna kasoo horjeedaa heshiiyadii iyo habraacyadii Doorashooyinka.
Hadaba, Galmudug waxay cadeyneysaa inaysan aqbali doonin jadwal iyo go’aamo aan kasoo bixin Madasha Wadatashiga Qaranka.
Ugu danbeyntii,Galmudug waxay ka digeysaa waxkasta oo caqabad ku noqon kara dhameystirka hanaanka doorashooyinka.
Qoraalka uu soo saaray Maamulka Koonfur Galbeed.
Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed wuxuu caddaynayaa inaysan waxba kala socon jadwalka la faafiyay ee ku saabsan hannaanka loo marayo isu keenista, shahaado bixinta iyo dhaarinta xildhibaannada la doortay ee Labada Aqal ee Barlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, sidaas darteedna warqadda soo baxday aysan ahayn mid dhaqangal ah.
Koonfur Galbeed waxay kaliya aqbalaysaa jadwal iyo qorshe ay ku heshiiyeen Madasha Wadatashiga Qaran kaasoo ku yimid wadatashi ay ka qeybqaateen dhammaan Dowlad Goboleedyada iyo Maamulka Gobolka Banaadir.
Ugu dambeyntii, Koonfur Galbeed waxay xaqiijinaysaa in Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha iyo Guddiga Doorashooyinka Heer Federaalba wax kaalin ah oo sharci waafaqsan aysan ku lahayn u yeerista iyo qabanqaabada dhaarinta Xildhibaannada la doortay, waajibaadkaasna uu sharcigu siinaayo Barlamaanka 10aad sidii dhacday Barlamaankii 9aad oo ah doorashadii u dambaysay ee dalka ka qabsoomay 2016/2017.
Galmudug & KGS oo kasoo horjeestay Jadwalka ay soo saareen Guddiga doorashooyinka Heer Federaal was last modified: March 16th, 2022 by warsan radio
Jubbaland oo shaacisay Jadwalka doorashada Afar Kursi
Jubbaland oo taageertay Go’aankii lagu Eryay Francisco Madeira
Al-shabaab oo xalay madaafiic ku garaacay Beledweyne
Howlgallo laga sameeyay degaano ku dhow Magaalada Dhuusamareeb